လူချမ်းသာတွေ လိုက်နာတဲ့ ပိုက်ဆံချွေတာရေး နည်းလမ်း ( ၃ ) ခု - Learning English Myanmar
09697597761 [email protected]
လူချမ်းသာတွေ လိုက်နာတဲ့ ပိုက်ဆံချွေတာရေး နည်းလမ်း ( ၃ ) ခု
Apr 3, 2019 | Article |0comments
ပိုက်ဆံဟာ ချွေတာသုံးပြီး းမဖြုန်တီးသရွေ့ မိမိတို့ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒ၊ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်ပေးတဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေအားလုံးဟာ နေ့စဉ်သုံးစွဲဖို့ ငွေကြေးတွေကို ရှာဖွေရင်းနဲ့ အချိန်တွေ အများကြီး ကုန်လာကြပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဂရုစိုက်ရမှာကတော့ လူချမ်းသာ ပိုက်ဆံကို ဘယ်လိုများ ချွေတာသုံးသလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတခါ ဖော်ပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ချမ်းသာတဲ့လူတွေ လိုက်နာလေ့ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံချွေတာနည်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ၂၄ နာရီ စည်းမျဉ်း
၂၄ နာရီစည်းမျဉ်းကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ သင်ပစ္စည်းတခုခုကို ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် တရက်လောက် သေချာစဉ်းစားဖို့ပါ။ လိုချင်တာလား၊ လိုအပ်တာလား ဆိုတာကို သေချာသိအောင် လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သင့်မှာ ရှိနေတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ အဲဒီပစ္စည်းကို ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေပါ့မလား စတာတွေကို စဉ်းစားဖို့ အချိန်တရက်လောက်တော့ ပေးသင့်ပါတယ်။
(၂) အတွေ့အကြုံဟာ တန်ဖိုးဖြတ်ရ ခက်ပါတယ်
တန်ဖိုးကြီးတဲ့ အရာတွေကို ဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းက သင့်ကို လူတွေအမြင်မှာ ချမ်းသာတဲ့ ပုံစံပေါက်စေပေမယ့် တချိန်ကျရင် ဒီပစ္စည်းတွေဟာ ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးသွားမှာပါပဲ။ ဘယ်တော့မှ မဟောင်းနွမ်းဘဲ သင့်ရဲ့ အတွေးထဲမှာ ထင်ကျန်နေမယ့် အရာကတော့ သင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခရီးထွက်ခြင်း၊ ပညာရပ်တခုခုကို ရှာဖွေခြင်းတွေကို လက်ထဲ ပိုက်ဆံရှိတဲ့ အချိန်မှာ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
(၃) အကြွေး အရင်ဆပ်ပါ
လစာ ထုတ်ပြီးတဲ့ အချိန်တွေမှာ စားသောက်ပျော်ပါးတာတွေ မလုပ်ခင် အကြွေးတွေနဲ့ အခွန်တွေကို အရင်ဆောင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ရေခွန်၊ မီးခွန်၊ အိမ်လခ စတာတွေကို ပေးပြီးမှ အပျော်အပါးအတွက် ပိုက်ဆံသုံးသင့်ပါတယ်။ လစာထုတ်ပြီး နောက်တရက်မှာ ပိုက်ဆံအားလုံးကုန်ပြီး အကြွေးတွေနဲ့ တလလုံး မနေရအောင် သေချာစာရင်းပြုစုပြီးမှ ပိုက်ဆံကို သုံးဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
Address : No 33, Ayar Wunn Inner Road, TharKayta Township, Yangon.
Phone : 09697597761
အမြဲတမ်း အကြွေးတင်မနေဖို့ ရှောင်သင့်တဲ့ အချက် (၇) ချက်
သုံညဘဝနေ တရုတ်ပြည်၏ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာသူ ဂျက်မား၏ အတုယူဖွယ် ဘဝဇာတ်ကြောင်း
ကွမ်းယာရောင်းသူဘဝမှ အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီး ဦးအောင်ဆန်းဝင်းဘဝသို့
©2018 Learning English Myanmar. All Right Reserved. Power By Discuss Agency.